Ifulethi elihle elineebhloko ezintathu ukusuka kwi-boardwalk
Jardim Itália, Santa Catarina, Brazil
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguLarson
Indawo entle ebekwe kweyona ndawo iphakamileyo yase-Chapecó, ibhloko enye ukusuka embindini kunye neebhloko ezimbini ukusuka kwi-boardwalk, enkulu (120 m²), ekhuselekileyo (iigridi kunye nocingo lombane). I-Cable TV, i-air conditioning kumagumbi, i-whirlpool. Umamkeli uhlala kwibhloko enye kude. Igaraji enye yemoto, ikhitshi eligcweleyo elinezitya kunye neekristale. Le ndlu intle, iphangalele, ilungele ukonwabisa abahlobo, ukupheka, ukuphumla kunye nokonwabela.
Ubumelwane bugqwesile, indawo yokuhlala, kufutshane nevenkile ezinkulu, iikhemesti, iibhaka, iivenkile kunye neecafe ezintle, zilungile kwaye zikhuselekile ukuhamba ekuseni okanye emva kwexesha lasemini.
Umbuki zindwendwe ngu- Larson
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Jardim Itália